ESI EMELITE YANDEX BROWSER GAA NA NKE KACHASỊ ỌHỤRỤ - YANDEX - 2019
Esi emelite Yandex Browser gaa na nke kachasị ọhụrụ
A na-etinye ọnụahịa ego ọ bụla na ọtụtụ ngwaahịa. O nwere ozi kachasị mkpa: ọnụahịa, ika, emeputa na ụbọchị nke nrụpụta. Ụdị dị iche iche na-ejikarị aka ma ọ bụ site n'enyemaka nke ndị editọ ederede, ma taa, anyị ga-ele anya usoro a pụrụ iche nke a kpọrọ "Mbipụta Ahịa Tags", bụ isi ọrụ nke a na-elekwasị anya na usoro a.
A na-egosipụta mkpado mkpado niile na tebụl a, ebe ha na-edezi. E guzobere ìgwè nke ngwongwo, a na-agbakwụnye aha ahụ na ihe ndị dị mkpa dị mkpa. Ịkwesịrị ịhọrọ otu ngwaahịa ka ihe ọmụma banyere ya mepee na nri, ebe ị nwere ike idezi ma hichapụ ụfọdụ ederede.
Lezienụ anya n'akụkụ taabụ. "Rịba ama". Enwere obere oghere iji gbakwụnye ihe ndetu, a na-egosi koodu akara n'okpuru. Ị nwere ike itughari ederede site na clipboard.
Aha ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ nke onye na-azụ ihe na-etinye aka na ahịa ndị natara na ọnụahịa ahịa. Na "Mpempe akwụkwọ ntinye akwụkwọ" enwere ebeabụ dị iche iche ebe ị nwere ike ịjupụta ozi niile dị mkpa banyere ndị ọrụ nhazi, mgbe ahụ jiri ya na-ejuputa ụdị. N'elu okpokoro bụ isi ngwaọrụ nchịkwa.
Ihe na-esote taabụ bụ maka agbakwunye ụghalaahịa ndị a ga-eji jupụta ozi ahụ na mkpado ọnụahịa ahụ. Tebụl fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke gara aga. N'okpuru nchịkwa dị n'elu tebụl nwere ọrụ nke ịgbakwunye akwụkwọ ahịa na aka, ọtụtụ njuju na-agbakwunye ebe ahụ - ṅaa ntị na nke a ma ọ bụrụ na tebụl dị oke ezughị gị.
Na-esote, anyị na-akwado iji anya na-ele taabụ na mba. Enwere ole na ole n'ime ha ebe a, ma nke a abụghị nsogbu, n'ihi na mmebawanye akwụkwọ nke ndepụta ahụ ga-ekwe omume. Mepụta ohuru ohuru ma tinye aha achọrọ n'ebe ahụ. Mgbe ị na-azọpụta, a ga-egosipụta obodo a na ntuziaka n'oge e kere eke ọnụahịa.
Na tebụl na-edozi akụkụ ikpeazụ nke ngwaahịa. Enweghị usoro mmesapụ aka n'usoro n'usoro ihe omume ahụ, ya mere, mgbe ọnụ ọgụgụ dị mkpa iji gosipụta Mbelata, nke a tụrụ nha.
Ntọala ikpeazụ bụ ọrụ maka ịgbakwunye ngwongwo nke ngwaọrụ na ọnụahịa mkpado. N'ebe a, ị nwere ike tinye ọtụtụ ahiri okpokoro n'otu oge, anyị na-adụkwa gị ọdụ ka ị jupụta ya tupu ịmalite ịrụ ọrụ na "Mbipụta mkpado." N'ọdịnihu, ị nwere ike idezi ma ọ bụ hichapụ ọ bụla n'ahịrị.
Mpempe akwụkwọ nbipụta
Mgbe o juputara na achọta achọrọ, ihe niile fọdụrụ bụ iji bipụta ọrụ a rụchara. Usoro ihe omume ahụ na-enye oke nhọrọ nke ụdị ọkwa dị iche iche na ndebiri ntọala. Họrọ otu, mgbe ị gachara, ị ga-aga na window nhụchalụ, ebe ị ga - pịa "Bipute".
Onye Okike Echere Ahịa
Ọ bụrụ na ndokwa edozi nke ihe ndị dị na ụdị ahụ adịghị adabara gị, jiri onye mmebe ahụ wuru. O nwere ihe bara uru. Bugharịa na gbanwee ahiri ahọrọ, echefula iche iji chekwaa nsonaazụ ya, n'ọdịnihu ọ nwere ike iji ya dị ka template.
Ihe omume a bụ n'efu;
E nwere ọrụ na tebụl dị mkpa;
Onye na-emepụta ihe mkpado ọnụahịa.
N'oge a na-anwale "Mbadamba ihe ntinye akwụkwọ" achọtara.
Na nyochaa nke usoro ihe a na-abịa ná njedebe, anyị tụlere atụmatụ na ngwaọrụ ya niile. N'ịkọwa elu, m ga-achọ ịhụ na "Mbipụta akwụkwọ mkpado" na-arụ ọrụ ya kpamkpam, dị mfe iji jikwaa ma mezie usoro nke ịmepụta ọrụ. Ozugbo akwado ka ị budata ngwa ngwa ahụ, ọ bụkwa n'efu, ma nwere ọtụtụ atụmatụ.
Download Bipute Ahịa Tags maka n'efu
Software maka ibipụta mkpado ahịa Ahịa ahịa AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ PricePrint
Bipute Ahịa Tags - usoro mmemme dị mfe a na-eme iji mepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị dịka ọnụahịa mkpado dị iche iche na nha. Ekele maka ọrụ na ngwaọrụ ndị a rụrụ, a na-eme ka usoro a dị mfe.
Onye Mmepụta: Lab-1m